Wararka Maanta: Arbaco, Jun 9 , 2021-Guddiga sare ee farsamada doorashooyinka dalka oo soo saaray qodobo xasaasi ah
Guddiga ayaa kulankooda maanta diirada ku saaray sidii aay u fulin lahayeen howlaha adag ee horyaala Raysal wasaaraha Soomaaliya uu iyaga u igmaday iney ka taageeraan, taaso ah hirgelinta doorasho xor iyo xalaal ah oo dalka ka qabsoonta.
Waxay shaaciyeen guddiga sare ee farsamada doorashooyinka dalka afar qodob oo aay kaga taageeri doonaan Raysal wasaare Rooble doorashada loo xilsaaray inuu dalka ka qabto.
Guddiga waxay Raysal wasaare Rooble ka taageeri doonaan sadaxda qodob ee hoos ku xusan ayaa lagu yiri.
1- In qodobadii heshiiska lagu gaaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee 27-may-2021 loo fuliyo si habsami leh.
2- Xiriirinta dhamaan Hay'adaha ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka si loo hagaajiyo xiriirka hay'adaha wada shaqeynaayo.
3- In taageero farsamo uu siiyo guddiyada doorashooyinka.
4- Xiriirinta XR, Golaha wadatashiga qaranka iyo Beesha Caalamka.
Guddigan ayaa u muuqanaya kuwa dardar galinaya howsha culus ee uu u xilsaaray Raysal wasaaraha Soomaaliya oo looga fadhiyo inuu dalka ka qabto doorasho loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay.